DOME RTA ANKORONDRANO :: Lanonana feno ny tsiaro an’i Johnny Halliday, Elvis Presley ary i Charles Aznavour • AoRaha
DOME RTA ANKORONDRANO Lanonana feno ny tsiaro an’i Johnny Halliday, Elvis Presley ary i Charles Aznavour
Korana sy fety tsy fahita firy. Anisan’ny fiarahana takariva niavaka sady nanamarika ny faran’ny herinandro lasa teo ny “Fair-Play entre 2 tours”, fampisehoana nitondrana tsiaro sy namerenana indray an’ireo hira tena nampalaza sy nanamarika an’i Johnny Halliday sy Elvis Presley ary i Charles Aznavour, notontosaina tetsy amin’ny efitrano malalaky ny Dôme RTA Ankorondrano, tamin’ny alin’ny zoma lasa teo. Voa­lohany hatramin’ny farany, nampilendalenda hatrany ny seho.
Namaky lay ny lanonana i Stenny. Niakatra nanaraka izany avy hatrany ny maripana teny amin’ireo mpijery marobe teny am-pitoe­rana. Tsy nidina intsony izany satria nanao tohivakana ny fiantsana teny an-tsehatra. Nifandimby nikalo tao ireo mpanakanto marolafy samy manana ny hanitra ho azy. Nahafinaritra ny mozika niangalian’i Lumène sy Rolly. Nampientanentana ny rehetra ihany koa ny kalo an-gitara noentin’i Koloina tamin’ny endriny akaostika. Tsy latsa-danja tamin’ireo ny seho naroson’ny orkesitra Diap. Nahazo tehaka nirefodrefotra avy amin’ny mpijery koa ny namoahan’ireo andriambavilanitra efatra avy amin’ny Sweety, ny soradihy miavaka izay nanome tsiro hafa ny fiarahana.
Hita taratra, tamin’ny zoma lasa teo, ny maha matihanina ny RTA na teo amin’ny lafiny fandrindrana ny hetsika izany na teo amin’ny fikarakarana ara-teknika. Nahasarika ny maso avy hatrany ny haingo sy ny jiro nandravaka ny sehatra. Niara-dalana tamin’ny hira natosak’ ireo mpanakanto izany, ka samy tafiditra tao anatin’ny “ambiansa zoma manifika” na ny teny an-tseha­tra na ireo mpijery. Nokatsa­hina ny raitra ka nolaroina hetsika samihafa ny fampisehoana. Nisy ny fampirantiana môtô “Harley Davidson” maromaro teny an-toerana. Nahasarika olona maro ny toerana natokana hakàna sary miaraka amin’ny môtô sy ireo tovovavy maha­fatifaty eo akaikiny. Nanoma­na toeram-pivarotana karazan-tsakafo sy zava-pisotro isan-karazany ny mpikarakara, ka nanarampo araka izay filàny ny rehetra. Tonga rahateo ny hanomezana fahafaham-po ny mpijery.
Nitondra hafanana ho an’ny fiarahana ihany koa ny fidonan’ny fanamafisam-peon’ny Natural Sound, izay raitra tokoa. Raha fintinina, sady voarotsirotrsy tamin’ny mozika ny sofina no afa-po ny mason’ireo mpanatrika. Marihina fa ora iray taorian’ny fanombohana, dia mbola nitanjozotra hamonjy ny Dôme RTA ny mpijery. Tsy Malagasy ihany, fa maro be koa ny teratany vahiny tonga nianoka ny fampisehoana.
AKON’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA :: Manao velirano i Andry Rajoelina fa ho kandidà hampiray ny Malagasy rehetra